Diyo post :: एएफसी क्वालिफायर्स यु-२३ फुटबल:पहिलो हाफको समाप्तिमा नेपाल १-० ले पछाडी (लाइभ हेर्नुहोस) एएफसी क्वालिफायर्स यु-२३ फुटबल:पहिलो हाफको समाप्तिमा नेपाल १-० ले पछाडी (लाइभ हेर्नुहोस) - Diyo post
काठमाडौं,२ असार । एएफसी यु २३ क्वालिफायर्स फूटबल अन्तरग अहिले नेपाल र उब्जेकिस्तान बिच खेल भैरहेको छ । युएईको अल अइनस्थित ताहानोनविन मोहम्मद स्टेडियममा नेपालको दोश्रो खेल खेलिरहेको छ । पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक संयुक्त अरव इमिरेट्स युएई संग पांच गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो ।
जारी खेलको पहिलो हाफको समाप्ति हुँदा नेपाल १-० ले पछी परेको छ । पहिलो हाफमा नेपाललाइ दवावमा राख्न उव्जेकिस्तान सफल भएको छ भने दोश्रो हाफमा नेपालले कम्ब्याक गर्नसके जित निकाल्न सकिने देखिन्छ । खेलको २० औं मिनेटमा उब्जेकिस्तानी खेलाडीले गोल गरेपछि नेपाल पछाडी परेको हो ।
नेपालको तर्फबाट विमल घर्ति मगरले कप्तानी सम्हालेका छन् । गोलरक्षकमा एलेन न्यौपाने छन भने डिफेन्समा अनन्त तामाङ,गौरव वुडाथोकी र कमल श्रेष्ठ रहेका छन ।त्यसैगरी मिडफिल्डमा हेमन गुरुङ ,पुजन उपरकोटी र विश्वास श्रेष्ठ रहेका छन भने फरवार्डमा विमल घर्ति र अन्जन विष्ट खेलिरहेका यस खेलमा नेपालले जित्ने पर्ने दवाव रहेको छ ।
रोनाल्डो १ सय १२ मिलियन पाउण्डमा ६ वर्षको लागी युभेन्टससंग अनुवन्धित, रियलमा अब को आउला ?
काठमाडौँ । चर्चित फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले रियल म्याड्रिड त्यागेको आधिकारिक घोषणा गरेका छन । रोनाल्डो स्पेनिस क्लव रियल म्याड्रिडबाट ...
वेल्जियम भर्सेज फ्रान्सः ‘काउन्टर एट्याक’ दुबै टिमको बलियो पक्ष, यस्तो छ संभावित लाईन अप !
काठमाडौँ । रसियामा जारी विश्वकप २०१८ मा आजबाट सेमिफाईनलका खेलहरु शूरु हुँदै छ । रसियाको सेन्ट पिटरवग्र्स स्टेडियमा नेपाली समयअनुसार ...
रेफ्री तालिम शुरु !
भीमदत्तनगर– कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा जिल्ला भलिबल संघले सोमबारदेखि प्रदेश नं ७ स्तरीय रेफ्री तालिम शुरु गरेको छ । पाँच दिनसम्म सञ्चालन ...
स्वीडेनलाई हराउदै इङ्ल्याण्ड
काठमाडौं । रसियामा जारी विश्वकप २०१८ अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलको खेलमा स्वीडेनविरुद्ध इङ्ल्यान्डले २ गोल गर्न सफल भएको छ । इङ्ल्याण्डले ...
काठमाडौँ । विश्वकप फुटबलमा अन्तिम १६ का सबै खेलहरु समाप्त भएको छ । मंगलबार राति कोलम्विया र इङल्याण्डबिच भएको खेलसंगै ...